Huawei ဖုန်း Clone မှအချက်အလက်နှင့်ဖိုင်များကိုစမတ်ဖုန်းအသစ်သို့ Emulator.online to Transfer သို့လွှဲပြောင်းပါ
စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်ခု ၀ ယ်ပြီးပြီဆိုလျှင်သင်၏ဒေတာအားလုံးကိုသင်၏မိုဘိုင်းအဟောင်းမှအသစ်တစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းလိုပါသလား။ ဖြေရှင်းနည်းမှာ Huawei ဖုန်းကိုယ်ပွား, နာမည်ကြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီကတီထွင် application တစ်ခု, ပြည့်စုံ, Multiplatform ထို့ကြောင့် Android နှင့် iPhone နှစ်ခုလုံးနှင့်သဟဇာတ။
ဤလျှောက်လွှာသည် iPhone မှ Android စမတ်ဖုန်းအသစ်သို့ပြောင်းသူများနှင့်၎င်းအနေနှင့် ၄ င်းတို့၏ Huawei ဖုန်းကိုအခြားအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲသူများအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသည် (ယနေ့ အချိန်မှစ၍ Huawei ဖုန်းများသည်ယခင်ကထက်နည်းနည်းရောင်းသည်) ။
အဖတ်ကိုလည်း:ဒေတာများကို Android မိုဘိုင်းတစ်ခုမှအခြားတစ်ခုသို့အလိုအလျောက်လွှဲပြောင်းပါ
con Huawei ဖုန်းကိုယ်ပွား ဖြစ်နိုင်တယ်
မှဒေတာလွှဲပြောင်း iPhone ကို/အိုင်ပက် စမတ်ဖုန်းတစ်ခု Huawei နှင့်အပြန်အလှန်;
မှဒေတာလွှဲပြောင်း iPhone ကို/အိုင်ပက် စမတ်ဖုန်းတစ်ခု အန်းဒရွိုက် နှင့်အပြန်အလှန်;
စမတ်ဖုန်းမှဒေတာလွှဲပြောင်း အန်းဒရွိုက် စမတ်ဖုန်းတစ်ခု Huawei နှင့်အပြန်အလှန်;
yo ဒေတာ အရာကနေတဆင့်လွှဲပြောင်းနိုင်ပါတယ် ဖုန်းကိုယ်ပွား အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသူတို့နေသောခေါင်းစဉ်:
အားဖြင့်ချမှတ်ထားလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်သည် အန်းဒရွိုက် ဒေတာရှိပါတယ် အဘယ်သူမျှမ လွှဲပြောင်းနိုင်သည်
ထိုကဲ့သို့သော WhatsApp ကိုအဖြစ် applications များထံမှဒေတာ;
Cloud ရှိဒေတာများ - ဥပမာ၊ Google Photos တွင်သိမ်းဆည်းထားသောဓာတ်ပုံများ;
ဖုန်း Clone ဖြင့်ဒေတာကိုဘယ်လိုလွှဲပြောင်းမလဲ
၁။ ပထမဆုံး app ကို install လုပ်ရန်လိုသည် ဖုန်းကိုယ်ပွား နှစ်ခုလုံး devices များပေါ်တွင်။ စမတ်ဖုန်းနှစ်ခုလုံးလျှင် Huawei သင်လျှောက်ထားပြီးသားလျှောက်လွှာကိုတွေ့လိမ့်မည်။
၂) App ကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်၎င်းစက်နှစ်ခုလုံးတွင်ဖွင့်ပြီးနှိပ်လိုက်ပါ "လက်ခံရန်" ညာဘက်အောက်;
၃) စက်နှစ်ခုလုံးမှာ၊ အတည်ပြုခြင်း သင့်ရဲ့ဒေတာကိုရယူနိုင်ဖြစ်ဖို့,
၄။ သင်၏စမတ်ဖုန်းအဟောင်းကိုသဘောတူခွင့်ပြုသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ကင်မရာကသင့်ကိုကုတ်ရိုက်ရန်တောင်းဆိုလာလိမ့်မည် QR ကုဒ်ကိုစမတ်ဖုန်းအသစ်တွင်သင်အနေဖြင့်အဟောင်းဖုန်းအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရမည် "Huawei", "အခြား Android", "အိုင်ဖုန်း / အိုင်ပက်"။ မှန်ကန်သောတ ဦး တည်းကိုရွေးပါနှင့် QR ကုဒ်ကို.
၅။ စမတ်ဖုန်းအဟောင်းနှင့်အတူ၊ QR ကုဒ်ကို: ဒီကနေစက်နှစ်ခုကြားက connection ကြိုးပမ်းမှုကစလိမ့်မယ် အတည်ပြုခြင်း pop-up window မှတဆင့်အသုံးပြုသူကဆက်သွယ်မှု။
၇။ နှိပ်ပါ "အတည်ပြုချက်" နှင့်ဒေတာရွှေ့ပြောင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအလိုအလျှောက်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒေတာလွှဲပြောင်းအမျိုးအစား link တစ်ခုမှတဆင့်ထုတ်ယူသည် ဝိုင်ဖိုင် ဖန်တီးသည် ဒီရန် နှစ်ခုကိရိယာများအကြား: ဤလမ်းအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်လိမ့်မည် လုံခွုံရေး mi လျင်မြန်စွာ.
သင့်တွင်ဒေတာများစွာရှိပါကရွှေ့ပြောင်းခြင်းသည်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်၊ သို့သော်ကျန်ရှိသောအချိန်ညွှန်ပြချက်သည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်နေဆဲဖြစ်သည်။ စမတ်ဖုန်းများအကြားဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ပါက၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပြီး၎င်းသည်ရပ်တန့်သည့်နေရာမှလွှဲပြောင်းခြင်းကိုပြန်လည်စတင်လိမ့်မည်။
အဖတ်ကိုလည်း: Android မှ iPhone သို့ပြောင်းပြီးအချက်အလက်အားလုံးကိုလွှဲပြောင်းပါ
7 ရက်အကြာမှာပျောက်ကွယ်သွားသော WhatsApp ပေါ်ရှိမက်မက်ခ်ျမက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖွင့်ပါ
Instagram Reels နှင့်အတူရယ်စရာတိုတိုဗီဒီယိုများဖန်တီးနည်း
Android ဖုန်းအသစ်လား။ ဖုန်းအဟောင်းမှဒေတာအားလုံးကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းရမလဲ